Sidee daroogada tijaabada ah ee J147 (1146963-51-0) waxay ku celisaa Alzheimer iyo Aging
Daroogada tijaabada ah J147 (1146963-51-0) Alzheimer's Aging
/blog/J147/Daroogada tijaabada ah J147 (1146963-51-0) Alzheimer's Aging
Posted on 07 / 10 / 2018 by Dr. Patrick Young ku qoray J147. Waxay leedahay 0 Comment.
Cilmi-baarista cudurka Alzheimers ayaa soo jiidatay qaar ka mid ah maskaxdii ugu fiicneyd ee cilmi-baaris caafimaad ee la soo dhaafay sannadihii 20. Inkastoo cilmi-baarayaashu ay wax badan ka bartay cudurrada, cudur-sidaha, iyo wax-qabadkooda, horumarin yar ayaa la sameeyay markii la la dagaallamay cudurka.
Kooxda ayaa ka danbeeya daroogada tijaabada ah J147 (1146963-51-0) waxay go'aansadeen in ay qaataan qaab kale. Natiijooyinka hore waxay ahaayeen kuwo cajiib ah, cilmi-baarayaashuna waxay sii wadayaan inay bartaan sida daroogada cusubi ay ula dhaqanto unugyada kala duwan ee jirka.
waa maxay J147?
J147 waa budada nootropics marka hore lagu sameeyo 2011. Cilmi baadhayaashu waxay ogaadeen in daroogada, daraasado badan oo kala duwan, ay ku badali karaan xusuusta iyo hoos udhaca, ama xitaa gadaal, Alzheimer ee jiirarka.
Budada J147 waa hydrazide phenyl. Waxaa ka soo jeeda curcumin qaybta xuubka curiska. Waa sun u yar. Inkastoo ay jiraan walaacado hore, budada J147 looma muujinin inay yihiin kansar. Cilmi baadhayaashu waxay si ba'an u baartey suurtogalnimada suurtagalnimada iyagoo baaraya qiyaasaha jirka ee J147 ee maadada aadanaha iyo mashiinka iyo mashiinka lafaha.
Natiijooyinku waxay muujiyeen in J147 aan la qiyaasin amine amine ama hydrazines.
Hababka Caadiga ah ee Dagaalka Alzheimer's
Daawooyinka intooda badani waxay sameeyeen sanooyinkii hore 20 ayaa lagu beegsaday hannaanka sumcadlaha amyloid ee maskaxda ee bukaanka Alzheimers. Habkani wuxuu ka dhigayaa dareen macquul ah sababtoo ah lacagtan ayaa ah waxa dareemaya unugyada dareemayaasha dhimashada.
Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii sannado 20 aysan jirin wax horumar ah oo ku yimid tijaabooyinka kiliinikada iyada oo mid kasta oo ka mid ah daroogooyinka lagu beegsanayo lacagta caydha.
Habraac la xidhiidha ayaa ahaa inuu isku dayo oo lagu beegsado amyloid ka hor inta aan la samaynin kaydka caanaha. Cudurka amyloid wuxuu burburiyaa synapses ka hor inta uusan u dhigin dhalooyinka lakabka. Si kastaba ha noqotee, xitaa bartilmaameedkani hore ayaa loo xaqiijiyay inuu ahaa mid wax ku ool ah.
Ilaa horumarinta J147 (1146963-51-0), daaweynta dhabta ah ee Alzheimer waxay ahayd mid xannibaysa. Ma jirin waddo cad oo horey u jirtay mid kasta oo ka mid ah daroogooyinka la soo saaray sannadkii hore ee 20 iyo cudurkeenaha laftiisa laftiisa ma bixinaynin habab kale oo cad.
Sidee J147 (1146963-51-0) waxay ka shaqeyneysaa Alzheimer's
Kooxda ka dambeysa J147 waxay go'aansatay inay qaadato xeelad ka duwan dagaalka ka dhanka ah Alzheimers. Halkii la horumarin lahaa daawo kale oo la yiraahdo amyloid, kooxda ayaa go'aansatay in ay diiradda saarto halista ugu weyn ee Alzheimers. Halista ugu weyn ee halista ah waa da 'wayn - sidaas darteed kooxda ayaa u jeestay dadaalkeeda ku wajahan hababka da' yarta ah.
Kooxdu waxay abuurtay J147 adigoo isticmaalaya shaashado ku salaysan unugyada ku salaysan sunta jir-maskaxeed. Laga soo bilaabo shaashooyinkan, waxay soo dejiyeen budada J147.
Kalluunka J147 wuxuu u shaqeeyaa hoos u dhigga hawsha kubbadda ATP ee mitochondria. Unugyadaas difaaca jirka ka difaaca badan oo ka mid ah shimbiraha maskaxda ku xiran. Cilmi-baadhistu waxay muujineysaa sababta ay udubdhexaadintan u soo saartey saameynta neeroprotective-ka sababtoo ah doorka excitotoxicity-ka ee ciyaarida dhaawaca neuronal.
Neurons waxay noqdaan kuwo waxyeelo leh waxaana lagu dilaa ka soo horjeeda soo dhaweeyayaashu si loogu daaweeyo neurotransmitter glutamate. J147 waxay asal ahaan hoos u dhigtaa geeddi-socodka qatarta ah ee sunta maskaxeed ee da'da ah. Tani waxay ilaalinaysaa qanjidhada iyo, xitaa si aad u fiican, waxay sidoo kale kicin kartaa isbedelka qaar ka mid ah saameynta ugu badan ee Alzheimers.
J147 wuxuu u shaqeeyaa sidii Agaasiyiin ka soo horjeeda
Macmiilaha J147 maaha wax la mid ah daroogada Alzheimers oo kale oo gaadhay heer la mid ah cilmi baaris. Maadaama aysan diirada saarin jiritaanka cudur-sidaha ee cudurka, laakiin waxay ka shaqeysaa yaraynta khatarta ay soo bandhigeyso khatarta sii kordhaysa.
J147 wuxuu u shaqeeyaa sidii wakiilka gabowga. Ka tagida qalabkeeda, maskaxda bini'aadamka waxay horumarisaa suntan qaas ah. Waa sunta la xidhiidha da'da oo abuuraysa bay'ada Alzheimers si ay u koraan. J147 waxay dib u soo noqotaa saacadahan suntan suntan, taasina waxay sii adkeyneysaa Alzheimer in ay qabato shaqadeeda oo ka sii daraysa nidaamyada xasuusta ee kala duwan.
Waxaa suurtogal ah in habka ay J147 hormood ka noqon karto wax ka badan uun dagaalka Alzheimers. Sumeeyayaasha la midka ah ee ka hortagga gabowga waxay awoodi karaan inay bartilmaameedsadaan sunta kale ee keena cudurrada kale iyo cudurada kale ee da'da oo keliya ay tahay halis asaasi ah. J147 ma aha kaliya daawada Alzheimers. Xaqiiqdii waxay tahay daroogada caawisa in ay noqoto mid gaboobay.
J147 Dhibaatooyinka Daaweynta
Inkasta oo J147 markii ugu horreysay lagu horumariyey 2011, haddana waxay hadda ku dhowdahay in la ansaxiyo tijaabooyin ballaadhan oo caafimaad. Dhamaan talaabo kasta oo jidka ah, J147 ayaa lagu muujiyay inuusan aheyn mid si fiican u shaqeynaya, laakiin sidoo kale waxaa lagu muujiyey inuu deggan yahay.
Walaacyada hore ee ku saabsan suurtogalnimada J147 oo ah kansarku, ama haddii kale sun, ayaa la muujiyay inaysan aheyn kuwo aan sal lahayn.
Cilmi-baadhayaashu way ka walaacsan yihiin in ay qaataan tijaabooyinka bukaan-socodka oo socota oo inta badan qof kasta oo ku lug leh cilmi-baarista Alzheimers ayaa rajeynaya in J147 ay cadeeyn doonto inay tahay mid wax ku ool ah bani-aadmiga sidii uu ku jiray jiirarka iyo sheybaarka sheybaarka.
Natiijooyinka J147 Preliminary
Hore ee cilmi-baarayaasha waxay ogaadeen in J147 (1146963-51-0) waxay ka hortagi kartaa, oo dib ugu noqotaa, xusuus la'aanta jadeecada ee leh hannaanka dhaxalka ee Alzheimers. Si kastaba ha noqotee, sida rajada ah in natiijadaasi ay ahayd, dadka, kaliya 1% bukaanka Alzheimers ayaa leh qaybta dhaxalka. Nooca ugu caansan Alzheimer wuxuu la xiriiraa arrin gaar ah oo ku saabsan genetik, laakiin da'da weyn laftiisa.
Kooxda waxay ka badan tahay barashada saameynta J147 ee koox jiireed oo si dhaqsi ah u da'aya oo ay la kulmaan qaab jahawareer ah oo la mid ah da 'Alzheimer' oo laga helay bini-aadanka.
Natiijooyinka daraasaddan labaad waxay sidoo kale rajo ka muujiyeen. J147 wuxuu awood u lahaa in uu badbaadiyo garashada fahamka, xitaa marka la maamulo marxaladaha dambe ee cudurka. Waxay xasuustay xusuusta jiirarka waxayna ka hortagtay in sii xumaato.
Waxaa sidoo kale la ogaaday in marka J147 lagu daro donepezil waxa ay si fiican u shaqeynaysay dib u soo celinta xusuusta saxda ah iyo qadarinta. Hase yeeshee, J147 keliya ayaa ka sarreeya dib u soo celinta xusuusta.
Maxaa mustaqbalka loo hayo J147 (1146963-51-0)
Weli waxaa jira waddo dheer ka hor J147 (1146963-51-0) ayaa loo heli doonaa in lagu daaweeyo bukaanka Alzheimers badankooda. Marka ugu horreysa daawada waa in la dhammaystiro marxaladda tijaabinta ee adag. Marka tijaabooyinka kiliinikada dib loo eego, habka loo ansaxinayo FDA ayaa bilaabi doonta.
Cilmi-baarayaashu waxay ka fikirayaan baahida degdegga ah ee daaweynta macnaha leh ee cudurka Alzheimers, laakiin waxay sidoo kale ku qasban yihiin in aysan ku dhicin sayniska. Ilaa hadda, natiijooyinka dhammaantood ee J147 waa kuwo aad u fiican, mana jirto daroogada Alzheimers oo kale ayaa waligeed eegay arrimahan.
Wax badan oo ku saabsan J147:
Tags: iibso budada J147, Budada J147
Fariinta Fariin(Baahan yahay)
Fadlan qor magacaaga. Fadlan gali cinwaanka emailka sax ah. Fadlan gali fariin.
Kordhinta ugu ballaaran ee loogu talagalay budada Megestrol acetate Levonorgestrel: Sida ay u shaqeyso, u isticmaasho, saameynaha dhinaca
Kitty Pryde on 7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa -Phenylpiracet
Kurt on 7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa -Phenylpiracet
sheyga on 7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa -Phenylpiracet
Mary on 7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa -Phenylpiracet
Landen Burrows on 7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa -Phenylpiracet
Alaabta ugu iibinta badan
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Sunifiram
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Suuqa Noopept
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Bromantane
Su'aalaha 8 si aad is-weydiiso ka hor intaadan qaadan budada Cetilistat
Burburinta miisaanka ugu fiican: Budada Sibutramine (Meridia)
Qiimaynta ugu dambeysa
Clinbuterol (CLEN) budada HCL
Kudar budada loo yaqaan "sibutramine hydrochloride"
Xuquuqda daabacaada © 2018 aasraw Loo habeeyay aasraw.com
Anabolic steroids oo loo yaqaan "Producer"